Tang Jun Automobile Toddoba Laba Shaqaalaha Congress guul Haysta - Shiinaha Shandong Honglu
mashiinada dhismaha Mine
gaari gaadiidka Diesel
macdanta jiido dadka gaariga
macdanta gaari amarka
macdanta preload wheel
gaari New gaadiidka tamarta
Baabuurta kale ujeedada khaaska ah
gaari taangiga saliidda
TILMAANTA SOO SAARKA
Tang Jun Automobile Toddoba Laba Shaqaalaha Congress guul Haysta
In 3-dii January, qorraxda ahaa dhalaalaya iyo diiran sida guga. toddoba kulan ee shirweynaha shaqaalaha labaad ee shirkadda ayaa lagu qabtay qolka shirka toddoba dhismaha, guddoomiyaha Xue Xingzhen, Agaasimaha guud ee Zhang Yanhong, agaasimaha guud ee ku-xigeenka Wu Dengxi, Si Tao, Gao Yongguang, guddoomiyaha ganacsiga shirkadda ee ka Midowga iyo tababaraha ku xigeenka guud ee Zhang Jialin. Zhang Jialin, ku xigeenka Madaxweynaha iyo maamulaha guud ee shirkadda, ayaa guddoomiyay kulanka. 63 wakiilada shaqaalaha iyo 42 kaqaybgale wakiillo ka qeyb galay kulanka. Ergooyinka waxay soo wada ururiyeen si ay ugala hadlaan dhacdooyinka muhiimka ah, iyagoo muujinayay in talaabsan ee grand waayo, ruuxaan hormuudka iyo ganacsiga Tang Jun ee.
At 8:00 subaxdii, shirka furtaa bilaabay in song weyn ee Tang Jun. Qaybgalay ayaa dhageystay iyo tixgeliyaa "war on diyaarinta qorshaha shirkadda ee dhamaystiran ee 2018" by maamulaha guud xigeenka shirkadda, Wu Jianke , Wasiirka maamulka ilaha aadanaha, "on dib u eegis habka waxqabadka qiimeynta ee 2018" iyo "hadal qorshe maaliyadeed ee shirkadda ee 2018" by Li Xianguo, Wasiirka maaliyadda. Warbixinta Shaqada.
Kulanka, oo ah guddoomiyaha shirkadda, Xue Xingzhen, soo jeediyay siyaasadda shirkadda ee 2018, "kormeerka naftiisa iyo kormeerka iyo fulinta labada dhinac, xubnaha oo dhammu haleelaan caatada ah, yareeyo isticmaalka iyo ku qaadi kootada, hardiyi shabaqa cusub in ay la wareegaan ah suuqa ", iyo faahfaahin gool siyaasadda ee shirkadda oo faahfaahsan. In 2018, uu tilmaamay in hadafka siyaasadda shirkadda ee 2018 waxay ahayd in kor loo qaado tayada alaabooyinka sida line ugu muhiimsan, si ay u fuliyaan nidaamka kormeerka labada dhinac ee kormeerka is, si uu u qabto wax soo saarka caatada ah, si ay u fuliyaan wax ku oolnimada hoos u isticmaalka, si joogto ah bandhigo waxyaabaha ku cusub suuqa, in ay qaataan hogaanka in tallaabo qeybtii oo qabta suuqa.
In 2018, cadaadiska dhaqaalaha suuqa weli waa weyn iyo tartanka suuqa waa ka awood badan. Xue had iyo jeer ugu baaqaysaa wakiillada oo dhan ay si firfircoon uga bilowdo iyo shaqaalaha horseedi in ay dhamaystiran, si fiican u fuliyaan siyaasadda shirkadda, si adag iyo hal-abuur shaqeeyaan si ay u siiyaan play buuxda u talanti oo talanti oo shaqaalaha oo dhan iyo shaqaalaha, in ay si buuxda ay ogaadaan siyaasadda ee shirkadda ee 2018. Mark.
waqti Post: Apr-21-2018
No.1 wadada meishan, horumarinta dhaqaalaha zichuan, zibo Shandong Shiinaha
© Copyright - 2018: Dhammaan Reserved Rights.